Nke a bụ Huawei MediaPad M5. Mụta maka imepụta mbadamba ihe anyị ga -ahụ na MWC! | Androidsis
Aaron Rivas | | Huawei, MWC, Noticias, Mbadamba gam akporo
Nnukwu onye China Huawei, n'enweghị obi abụọ ọ bụla, abụrụla otu n'ime ụlọ ọrụ ama ama na ama na mpaghara gam akporo. Nke a bụ n'ihi ekwe ntị ya nke nnabata dị ukwuu na otuto kwesịrị dịka nke usoro ya P y nwunyeAgbanyeghị, ọ bụghị naanị na -elekwasị anya na ekwentị, kamakwa mbadamba na ngwaọrụ ndị ọzọ na, n'agbanyeghị na ọ bụ eziokwu, anaghị enwe ọmarịcha ahịa n'ahịa dịka mobi ha na -eme.
N'oge a, Anyị ga -ekwu maka imewe mbadamba ya ọzọ Huawei MediaPad M5, onye nọchiri MediaPad M3 nke ekwuputara afọ gara aga na Internationale Funkausstellung Berlin (IFA Berlin) nke, n'ezie, mere na Germany.
Asịrị na -adịghị agwụ agwụ gbasara mbadamba ihe a na -aga n'ihu kemgbe ọtụtụ izu ugbu a, mana ugbu a, mgbe ahụ, anyị ga -egosi gị ntụgharị okwu na -egosi anyị ihe ọ ga -adị.
Huawei ga -eji MediaPad M5 megharịa ahịrị mbadamba ya
5-anụ ọhịa Huawei MediaPad M8.4
N'isiokwu a anyị nwere ike ịhụ nke ahụ M5 nwere atụmatụ dị mfe na nke na -egosi anyị na Huawei ebughị n'obi ịme a Boom na mbadamba nkume a, mana naanị na -ezube imeghari, ikuku oxygenate wee gaa n'ihu n'usoro MediaPad ya maka ndị na -ege ntị na -achọ nkezi.
Ọzọkwa Ekwesịrị ịmara na ọ ga -abịa n'ụdị abụọ: Otu n'ime sentimita 8.4 nke ga -egosi anyị uru ya niile kwụ ọtọ, na nke ọzọ bụ sentimita 10.1 nke ga -egosipụta ọdịnaya ya na -ahụ anya.
5-anụ ọhịa Huawei MediaPad M10.1
N'ọnọdụ abụọ a, na ụdị 8.4 na 10.1-inch, anyị ga-ahụ, dị ka anyị nwere ike ịhụ na onyogho filọta, igwefoto n'ihu na onye na-agụ mkpịsị mkpịsị aka nke ga-adị n'okpuru ihuenyo na obere mgbanwe, yana, na nke abụọ , n'akụkụ aka nri. Kedu ihe ọzọ, ha ga -eji njedebe mara mma nke ukwuu bịa na ikekwe ọla na azụ, nke anyị ga -ahụkwa igwefoto na -enweghị ọnụnọ ọkụ Flash.
Banyere nkọwapụta nke anyị ga-ahụ na 5 inch MediaPad M8.4, Anyị nwere ike ịkọwapụta ọnụnọ gam akporo Oreo n'okpuru EMUI 8, yana batrị 4.980mAh, na mgbakwunye na ndị niile enwetara nkwenye FCC na foto dị n'elu.
Anyị na-eche na ụdị nke anụ ọhịa 10.1 ga-enwe otu njirimara, mana ọ bụghị ihe doro anya ... Anyị nwere ike chere maka okwu ikpeazụ sitere na Huawei nke anyị na-akwado ntopute ndị a niile, n'ihi na ha bụ naanị ya, na-agbapụta.
N'aka nke ọzọ, dịka anyị kwuru n'aha, a ga -ewepụta mbadamba ihe ndị a na Mobile World Congress nke ga -eme na ngwụcha ọnwa Febụwarị n'obodo Barcelona, ​​Spain.
Anyị ga-agwa gị!
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Huawei MediaPad M5. Mụta maka atụmatụ nke mbadamba ihe anyị ga-ahụ na MWC!
Sọpụrụ 7X nyochaa